Yan Aung: Fund ကောက်ခံရာတွင် စဉ်းစားသင့်သော အချက်များ
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ...
PayPal Mode လေးကို ဘလော့ဂ်မှာ ထည့်ပြီး Fund ကောက်တာကို သဘောကျတယ်ဗျ အချိန်ကုန်သက်သာမယ် မြန်ဆန်မယ်. Account ကိုတော့ ကိုကျော်ဇေယျရဲ့ Account ကိုပဲ ယူသုံးမယ်လေ. အရင်စဉ်းစားထားတုန်းကတော့ Hondi နဲ့ လွှဲတာပေါ့.
PayPal အကြောင်းသိပ်အသိကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် PayPal နဲ့ ပိုက်ဆံလွှဲဖူးသလို လက်လည်း ခံဖူးပါတယ်. သူက လွှဲငွေရဲ့5% ကိုလားမသိဘူး ဖြတ်ပါတယ်. အသေအချာ ထပ်ကြည့်ပြီး ပြန်ပြီး Confirm လုပ်ပါမယ်. စိတ်ကတော့ ချရတယ်. Bank ထဲကို တစ်ခါတည်း ၀င်သွားတာဗျ. လက်ခံမယ့်သူလည်း အလုပ်မရှုပ်ရတော့ ဘူးပေါ့ဗျာ. ဘဏ်ကိုလည်း online ကနေပဲ လှမ်းကြည့်ပြီး ငွေဝင်မ၀င် ကြည့်လို့ရတယ် ဒီတော့ ကျွန်တော်ကတော့ PayPal ကိစ္စကို ဖြစ်မြောက်အောင် စီစဉ်ချင်ပါတယ်.
လူနဲ့ ငွေလွှဲတာကလည်း လွှဲခဖြတ်မှာနဲ့ တူတူလောက်ပဲ. အလုပ်ရှုပ်တာတစ်ခု ပိုလာဦးမယ် မရမှာလည်း ပူရဦးမယ်ဗျ. အိုကေဗျာ. လိုရင်းကိုပြောရရင်တော့ PayPal HTML Code ကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတာ တစ်ယောက်ယောက်ကသိရင် ပြောပြစေချင်ပါတယ်.ခင်ဗျာ.
ဒုတိယကဏ္ဍက Fund ကို ဘယ်လို အချိုးကျ ကောက်ခံမလဲ
ကျွန်တော် အရင်တစ်ခါ ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးပါတယ်. စာမူအရေအတွက်ရယ်၊ စာအုပ် Size ရယ်၊ ကောက်ခံရမယ့် Fund ရယ်က တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်နေပါတယ်လို့. လောလောဆယ်မှာ စာမူ ဘယ်နှစ်စောင်ရွေးမယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေပါတယ်. ဒါကြောင့် စရိတ်လည်း မတွက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်. ဒါကြောင့်မို့ Fund ကို ဘယ်လို အချိုးကျ ကောက်ခံရမယ် ဆိုတာလည်း မသိဘူး ဖြစ်နေပါတယ်
အကြမ်းဖျင်းနဲ့ Overestimate လေးတွက်လိုက်ကြရအောင်လားဗျာ.
၁. စာမူ ၃၀ ရွေးမယ် (စာမူ တစ်ခုကို ၃ မျက်နှာ Average ထားမယ်. အားလုံး အပြီးအစီး စာမျက်နှာ ၁၀၀ ရှိမယ်၊ တစ်ခြားကုန်ကျစရိတ်တွေ အပါအ၀င် ဘယ်လောက်ကျမလဲ.)
၂. စာမူ ၄၀ ရွေးမယ်၊ စာမျက်နှာ ၁၂၀ ကနေ ၁၅၀ အထိခန့်မှန်းမယ်... ဘယ်လောက်ကျမလဲ.
နည်းနည်းလေးပိုတွက်မိတာ ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး. ဈေးနှုန်းတွေက အမြဲတမ်းတက်နေတာချည်းပဲ ဆိုတော့ Overestimate လေး လုပ်ထားမှ စိတ်ချရပါမယ်.
အဲဒါသေသေချာချာလေး တွက်ချက်ပြီး ပြောပေးပါဗျာ. စာမူရွေးချယ်ရေး အပိုင်းနဲ့ နာမည်ပေးရေး အပိုင်းကို တာဝန်အသီးသီး သတ်မှတ်ပြီးသွားပါပြီ. ဒီဇိုင်းအဖွဲ့က စာအုပ်နာမည်ကို ရရင် ဒီဇိုင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်. စာအုပ်နာမည်ရွေးပွဲကို April လကုန်မှာ အဆုံးသတ်ပါမယ်. စာမူဖောင်တွေကိုလည်း တစ်ပြိုင်တည်းပိတ်ပါမယ်. ပြီးရင် မေလထဲမှာ ရွေးချယ်ရေးနှင့် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရေးဘက်ကို သွားပါမယ်. မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာ စာအုပ်စရိုက်မယ်၊ စိစစ်ရေးတင်မယ်. ဒါဆိုရင် ဩဂုတ် ဘလော့ဂ်ဂါဒေးအမှီမှာ ထွက်နိုင်ပါပြီ။
ဒါက အကြမ်းဖျင်း Timeline ပါ။ မြန်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်. မမျှော်လင့်တတ်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်တာမို့ပါ. Fund ကိစ္စက နည်းနည်း သိမ်မွေ့ပါတယ်. ဘာလို့လဲ.
၁. Fund ထည့်ပြီးမှ စာမူရွေးမှာလား. ဒါဆိုရင် ကိုယ့်စာမူပါရင် အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ မပါရင်တော့ ပိုက်ဆံကြီးပဲ ထည့်ထားရတယ်၊ ငါ့စာမူကျတော့ မပါဘူး ဆိုတဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ပေါ်လာနိုင်တယ်
၂. စာမူထည့်ပြီးမှ Fund ကောက်မှာလား. ဒါဆိုရင်တော့ စာမူရွေးချယ်ဖို့က အရင်ဖြစ်နေတယ်. ဒီတိုင်းလုပ်ရင်လည်း စာမူများများ ထည့်မှပဲ တွက်ခြေကိုက်လိမ့်မယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ပိုက်ဆံမထည့်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ချို့ရဲ့ စာမူတွေကိုလည်း ထည့်သုံးချင်တယ်လို့ ကော်မတီထဲက အဖွဲ့ဝင်တစ်ချို့က ဆွေးနွေးကြဖူးလို့ပါ... ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့မှာ နောက်ခံနည်းနည်းတောင့်တင်းဖုိ့လိုလာပြီ။ ဒီတိုင်းဆိုရင် စာမူကိစ္စကို အရင်ဖြတ်ပြီးမှ Fund ကောက်ခံရေးဘက်ကို သွားရလိမ့်မယ်. Timeline နည်းနည်းကြပ်သွားမယ်
၃. နောက်တစ်နည်းကတော့ ကိုကျော်ဇေယျ၊ ကိုဝေယံလင်း၊ ကိုဇင်ကိုလတ်၊ ကိုစိုးဇေယျ၊ မအိမ့်ချမ်းမြေ့၊ ကျွန်တော်နဲ့ စိတ်ပါဝင်စားသူ အမာခံ ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ချို့ တို့က တစ်ယောက်ကို ၁ သိန်းကနေ ၁ သိန်းခွဲလောက်ထိ စိုက်ထုတ်ပြီး Producers တွေ သဘောမျိုး လုပ်လိုက်ရင်တော့ အားလုံးပြေလည်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စက Backup Plan အနေနဲ့ပဲ ရှိစေချင်တယ်.
ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လျှော့တွက်လို့လည်း မရဘူး၊ ပိုတွက်လို့လည်း မရပါဘူး။ အခုရှင်းရင် ပြီးရောဆိုပြီးတော့လည်း လုပ်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ ငွေကြေးပမာဏအနည်းအများထက် အလုပ်ကို အလုပ်သဘောအတိုင်းပဲထားပြီး ဆက်ဆံကြတာက အခုရှုပ်ပေမယ့် နောင်ရှင်းပါတယ်. ပြီးတော့လည်း ကျွန်တော်တို့က အားလုံးကို မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်စေချင်လို့ပါ.
ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကျပ်အတည်း အချို့ပါ. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ နည်းလမ်း ၃ ကို နောက်ဆုံး သိပ်ကျပ်တည်းနေမှပဲ ဖြေရှင်းပါမယ်. ၁ နဲ့ ၂ ထဲကပဲ ဘယ်နည်းကို ရွေးရင် သင့်တော်မလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါမယ်.
ခက်ခဲကြောင်းပြောပြနေတာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ. အားလုံးသိအောင် တင်ပြတာပါ။ ပြီးတော့ တက်ညီလက်ညီနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်အောင်လို့လည်း အကြံဥာဏ်တောင်းခံတာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြတာပါ.